ဒူဒူကြီး: ဒူဒူကြားဖူးတဲ့ PLC (၂)
PLC Unit ဟာ user programs, I/O Memory data, user comments, CPU unit, special I/O unit parameters နဲ့ registered I/O table information အစရှိတဲ့ အချက်အလက် data တွေကို၊ ခွဲခြားပြီး လက်ခံထားပါတယ်။ လက်ခံထားတဲ့ data တွေကို battery နဲ့ backed up လုပ်ကာ၊ CPU Unit ရဲ့ memory area မှာသိမ်းဆည်းထားပါတယ်။ တချို့ PLC တွေမှာတော့ flash memory နဲ့ backed up လုပ်ကာ သိမ်းဆည်းထားပြီး၊ battery power fails ဖြစ်သွားပေမယ့် user programs တွေနဲ့ parameters တွေပျောက်ဆုံး ပျက်စီးမှု မဖြစ်နိုင်တော့တာတွေ့ရပါတယ်။
data တွေကိုသိမ်းဆည်းထားတဲ့၊ CPU unit memory area ကို user program area, I/O memory area နဲ့ parameter area ဆိုပြီးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ user program area မှာ၊ ပေးသွင်း ထားတဲ့ designed programs တွေကိုသိမ်းဆည်းထားပါတယ်။ I/O memory area မှာ CIO, internal I/O area, holding area, auxiliary area, DM Area, EM Area, Timer Completion Flags/Present Value, Completion Flag/Present Value, Task Flags, Index Register, Data Register, Condition Flags နဲ့ Clock Pulse အစရှိတဲ့၊ information တွေကို၊ သိမ်းဆည်း ထားပြီး၊ access command ပေးသွင်းကာ၊ ဝင်ရောက်ဖတ်ရှု နိုင်ပါတယ်။ Parameter Area မှာတော့၊ initial parameters တွေဖြစ်တဲ့၊ PLC System Parameters, Registered I/O Table, Routing Table နဲ့ CPU Bus unit ရဲ့ PLC Setup တွေကို၊ information အနေနဲ့ သိမ်းဆည်းထားပါတယ်။
Fig. System Configuration of PL-based Process Control
PLC Installation System မှာ loop control section သို့မဟုတ် loop control unit/ board လို့ခေါါတဲ့ "loop controller" တွေမှ၊ analog processing ကိုဆောင်ရွက်ပေးပြီး၊ "ladder processing" ကိုတော့ CPU မှ၊ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ loop controller မှာ၊ external analog I/O သို့မဟုတ် external contact I/O function တွေပါဝင်ခြင်း မရှိပဲ၊ analogue I/O unit မှ interface function တွေကို၊ လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ programming ပြုလုပ်တဲ့အခါ၊ CPU Unit အတွက်၊ additional programming software ကိုအသုံးပြုဖို့လိုအပ်ပြီး၊ Function block data အနေနဲ့ addition software ကိုအသုံးပြုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ monitoring နဲ့ operation ပြုလုပ်နေစဉ်၊ setting တွေထည့်သွင်းတဲ့အခါ၊ combination အနေနဲ့ တွဲဖက်နိုင်ဖို့၊ HMI section ကိုအသုံးပြုပါတယ်။
PLC ဆိုတဲ့ Programmable Logic Controller တလုံးဟာ၊ Program Creation Section, HMI Section, Control Section, Signal I/O Section, Signal Conversion - Signal Conditioner နဲ့ Field Device ဆိုတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကို၊ တဆင့်ခြင်းပေါင်းစပ်ကာ၊ control functions တွေကို၊ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ programming လို့ခေါါတဲ့ Program Creation Section ဟာ PLC controller တခုလုံးရဲ့Operation/ Display Screen Creation နဲ့  Control Block/ Sequence Creation ကိုဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
HMI Section ကိုထပ်မံခွဲခြားကြည့်ရင် Application Section နဲ့ Operation/ Display Section တို့ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Application Section ဟာ Batch management, brand management, remote surveillance (Web) Data gathering နဲ့ data analysis တို့ကိုဆောင်ရွက်ပေးပြီး၊ Operation/ Display Section ကတော့ Meter screen, graphics screen, trends, Warning history, operational history နဲ့ operational guide တို့ကို၊ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ control section ကိုလည်း၊ Loop Control Section နဲ့ Sequence Control Section ဆိုပြီးခွဲခြားနိုင် ပါတယ်။ Loop Control Section မှာ FBD လို့ခေါါတဲ့ Function Block, Sequence Table နဲ့ Step ladder တို့ပါဝင်ပြီး၊ Sequence Control Section မှာတော့ Ladder ပါဝင်ပါတယ်။ Signal I/O Section မှာ၊ Analog I/O, Digital I/O နဲ့ Pulse Input unit တို့ပါဝင်ပြီး၊ Signal Conversion ဆိုတဲ့ Signal Conditioner ကတော့၊ Temperature, Current/ Voltage နဲ့ Pulse တို့ကို လက်ခံပြီး၊ Distributor အနေနဲ့ I/O Section သို့ပေးပို့ ပါတယ်။ Sensors နဲ့ Actuator တွေတည်ရှိတဲ့ section ကိုတော့ Field Device အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်။
PLC တွေအပေါါ၊ သက်ရောက်နိုင်မယ့် stress တွေကို တတ်နိုင်သလောက်လျှော့ချဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သက်ရောက်နိုင်မယ့် stress တွေကတော့ temperature, humidity, vibrations, shocks, corrosive gases, over current နဲ့ noise တို့ဖြစ်ပါတယ်။ PLC ရဲ့ element parts တွေ အတွက်၊ operating temperature ဟာ၊ (5°C ~ 40°C) အတွင်းမှာ ရှိသင့်ပါတယ်။ PLC unit တတ်ဆင်ထားတဲ့ panel မှာ operating temperature ကိုလျှော့ချလေ့ရှိပါတယ်။ operating temperature ကိုလျှော့ချတဲ့အခါ၊ natural cooling system, forced ventilation system, controlled circulation system နဲ့ full room cooling system တို့ကို အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။
dust အနည်းငယ်သာရှိနိုင်မယ့် ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးမှာ၊ natural cooling နဲ့ forced ventilation တို့ကို သုံးကာ၊ operating temperature ကိုလျှော့ချပြီး၊ dust အများအပြားရှိနိုင်မယ့် ပတ်ဝန်းကျင် မျိုးမှာတော့၊ controlled circulation နဲ့ full room cooling တို့ကိုသုံးကာ operating temperature ကိုလျှော့ချ ပါတယ်။ 0°C အောက်မှာတော့၊ panel အတွင်းမှာတတ်ဆင်ထားတဲ့ internal heater ကိုအသုံးပြု ပြီး၊ 5°C အထက် မှာရှိနေမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးအဖြစ်၊ ဖန်တည်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ humidity ဆိုတဲ့ စိုထိုင်းဆကလည်း၊ PLC တွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ 35 ~ 85 % အတွင်း စိုထိုင်းဆရှိတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးမှာ သာ PLC တွေကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ အေးတဲ့ ရာသီမှာ heater ကို မကြာခဏ အဖွင့်အပိတ်လုပ်တဲ့အခါ၊ အပူချိန်ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲမှုတွေမှတဆင့်၊ condensation ဆိုတဲ့ ရေငွေ့ပျံမှုတွေ၊ panel အတွင်းမှာဖြစ်ပေါါနိုင်ပါတယ်။ condensation ဟာ PLC တွေကို၊ malfunctioning ဖြစ်ပေါါစေနိုင်တဲ့အတွက်၊ အေးတဲ့ရာသီမှာ၊ ညအချိန် heater ဖွင့်ထားသင့်ပါတယ်။
Fig. PLC product range
PLC တွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့အခါ၊ "the environmental (electricity and electrons) the sine wave vibration test method" နဲ့ စမ်းသတ်ပြီး မှ၊ ဈေးကွက်တင်ရောင်းချ ပါတယ်။ ဥပမာအဖြစ် OMRON Programmable Controllers တွေကို၊ JIS C0040/ IEC68-2-6 ဆိုတဲ့ the environmental (electricity and electrons) the sine wave vibration test method နဲ့ JIS C0041/ IEC68-2-27 ဆိုတဲ့ shock test method တို့ကိုသုံးပြီး၊ ထုတ်လုပ်တာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ PLC တွေမှာ ပါဝင်တဲ့ I/O unit အရည်အတွက်ပေါါမူတည်ပြီး၊ micro PLC, small PLC, medium PLC, large PLC နဲ့ very large PLC ဆိုပြီးခွဲခြားပါတယ်။ PLC တွေမှာပါဝင်တဲ့ I/O unit အရည်အတွက်ပေါါမူတည်ပြီး၊ micro PLC, small PLC, medium PLC, large PLC နဲ့ very large PLC ဆိုပြီးခွဲခြားပါတယ်။ I/O unit အရည်အတွက် (၃၂) ခုထက်နည်းလျှင် micro PLC, (၃၂) ခုမှ (၁၂၈) ခု အထိပါရှိလျှင် small PLC, (၆၄) ခုမှ (၁၀၂၄) ခုအထိပါရှိလျှင် medium PLC, (၅၁၂) ခုမှ (၄၀၉၆) ခုအထိ ပါရှိလျှင် large PLC နဲ့ (၂၀၄၈) ခုမှ (၈၁၉၂) ခုအထိပါရှိလျှင် very large PLC ဆိုပြီး သတ်မှတ်ပါတယ်။ PLC အရွယ်အစားပေါါမူတည်ပြီး၊ I/O unit အရည်အတွက်၊ memory အရွယ်အစား၊ programming language နဲ့ software function အမျိုးအစားတို့၊ ကွာခြားပါတယ်။
Fig. Simple electrical ladder diagram
PLC တွေမှာအသုံးပြုတဲ့ ladder diagram ဟာ field devices တွေတခုနဲ့တခု၊ အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက် အလုပ်လုပ်ပုံ operation sequences တွေကို၊ electrical နည်းဖြင့်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ device တခုဟာ activation အနေနဲ့ turning 'On' ဖြစ်ပေါါတဲ့အခါ၊ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ predetermined sequence အတိုင်း၊ အခြား device တခုအား၊ 'On' သို့မဟုတ် 'Off' အနေနဲ့ activation ဖြစ်ပေါါစေတဲ့ logic အား၊ ladder diagram ဖြင့်ဖော်ပြခြင်းလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ladder diagram တွေကို၊ hardwired Logic circuit များအား represent အနေနဲ့ ကိုယ်စားပြုဖော်ပြရန်၊ အသုံးပြုခဲ့ရာမှ၊ industrial standard တခုအဖြစ်၊ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ ယခင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ဝါယာကြိုး wires တွေ အစား၊ software instruction အနေနဲ့ PLC တွေမှာအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သလို၊ panel အတွင်းမှ ဝါယာကြိုး hard wired တွေအစား၊ CPU အတွင်းမှ soft wired အဖြစ်အသုံးပြုခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Fig. PLC implementation ladder diagram
Fig. Possible configuration of inputs and corresponding outputs
CPU ဟာ input တွေရဲ့ တန်ဘိုး status တွေကိုဖတ်ယူကာ၊ ထည့်သွင်းထားတဲ့ program အတိုင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ circuit element တွေကို energize ဖြစ်စေပြီး၊ output interface များမှတဆင့် output devices တွေကို၊ control အနေနဲ့ ထိမ်းကြောင်းပေးပါတယ်။ CPU ရဲ့ memory အတွင်းမှာ storing instructions အနေနဲ့၊ ထည့်သွင်းထားတဲ့အချက်အလက်တိုင်းကို၊ reference address တွေနဲ့ ဖော်ပြထား ပါတယ်။ ဥပမာ push button 'PB 1' ကို CPU အတွင်း၊ 'PB 1' အဖြစ်နဲ့သာဖော်ပြထားပြီး၊ limit switch 'LS 1' နဲ့ 'LS 2' တို့ကိုလည်း၊ CPU အတွင်း၊ 'LS 1' နဲ့ 'LS 2' အဖြစ်နဲ့သာဖော်ပြထားပါတယ်။ ဥပမာအဖြစ် pilot light 'PL' ကို "On" စေမယ့်၊ input configurations တွေနဲ့၊ corresponding outputs တွေကို၊ hardwired နဲ့ PLC တို့အတွက်၊ နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြထားပါတယ်။ အပြာရောင် line ဟာ 'power' ရှိနေတဲ့ အခြေအနေကို၊ ဖော်ပြထားတဲ့ line ဖြစ်ပြီး၊ ladder diagram ကိုအသုံးပြုကာ၊ monitoring ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ pilot light 'PL' ကို "On" စေမယ့်၊ configuration နည်းလမ်းအနည်းဆုံး (၂) မျိုး ရှိတာ၊ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
hard-wired control တွေကိုအသုံးမပြုပဲ၊ soft-wired control ဖြစ်တဲ့ PLC တွေကိုအသုံးပြုခြင်းကို 'flexible control system' အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ field input devices တွေနဲ့ field output devices တွေကို၊ ဝါယာကြိုး hard-wires တွေကို၊ physical wiring connection အနေနဲ့ ဆက်သွယ်ထားခြင်း မရှိသလို၊ soft-wired ဆိုတဲ့ control program ဖြင့်သာဆက်သွယ်ထားတဲ့အတွက်၊ အလွယ်တကူ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်နိုင်တဲ့ 'flexible control system' အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Example of hard-wiring changes as opposed to soft-wiring changes
solenoid အဖွင့်အပိတ်၊ On/ Off operation အတွက်၊ limit switch (၂) ခုကို အတန်း series နဲ့အပြိုင် parallel ဆက်ပြီး၊ control လုပ်တဲ့ ဥပမာကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ စက္ကန့်ပိုင်းအချိန်အတွင်း နောက်ထပ် limit switch တလုံးကို၊ ရှိပြီးသား PLC control circuit ထဲမှာ၊ ထပ်မံထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ အလားတူ PLC control circuit ထဲမှ software timer တွေဟာ၊ (၅) စက္ကန့်အတွင်း လိုသလို ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ သာမာန် ရိုးရှင်းတဲ့ program တွေကို၊ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ရာမှာ system တစ်ခုလုံးကို shutdown လုပ်ရန် မလိုအပ်တော့တာ၊ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ hard-wired control တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာတော့ အလားတူ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်မှုမျိုးအတွက်၊ အနည်းဆုံးနာရီဝက်ခန့် system တစ်ခုလုံးကို shutdown လုပ်ရန် လိုအပ်ပါတယ်။ အရေးကြီးတဲ့ စက်ကရိယာတွေနဲ့ processes ဆိုတဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ၊ နာရီဝက်ခန့် system တစ်ခုလုံးကို shutdown လုပ်တဲ့အခါ၊ ထုတ်လုပ်မှု production ရပ်ဆိုင်းခြင်းမှတဆင့်၊ ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါါလာနိုင်ပါတယ်။
Fig. Remote I/ O installation
အရွယ်အစားကြီးမားတဲ့ စက်ရုံအလုပ်ရုံနဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေမှာ၊ process control အတွက် လိုအပ်တဲ့နေရာအလိုက်၊ remote input/ output station တွေအဖြစ်၊ အဝေးတနေရာမှာ တတ်ဆင်ထားလေ့ ရှိပါတယ်။ hard-wired control တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာ၊ remote input/ output station တွေအတွက်၊ ဝါယာကြိုး hard-wires တွေကို၊ physical wiring connection အနေနဲ့ ဆက်သွယ်တဲ့အခါ၊ တတ်ဆင်သွယ်တန်းစားရိတ် မြင့်မားစွာကုန်ကျမှာဖြစ်ပါတယ်။ soft-wired control ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ PLC မှတဆင့် ရဲ့ CPU မှတဆင့်၊ coaxial cable သို့မဟုတ် twisted pair wire တွေကို သုံးပြီး၊ remote input/ output station တွေနဲ့ ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့အတွက်၊ တတ်ဆင်သွယ်တန်းစားရိတ် ကုန်ကျမှုလည်းကျဆင်းသွားပါတယ်။
Fig. Failure in PLC based system
PLC တွေဟာ တတ်ဆင်တဲ့အခါလွယ်ကူတဲ့အတွက် ကုန်ကျစားရိတ်၊ သက်သာပါတယ်။ PLC တွေဟာ အရွယ်အစားသေးငယ်ပြီး၊ hard-wired control အဖြစ် relays တွေကိုအသုံးပြုထားတဲ့ မူလ control panel ဧရိယာရဲ့ တဝက်လောက်သာနေရာယူပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သီးခြား modular ပုံသဏ္ဍန် တည်ဆောက်ထားတဲ့အတွက်၊ အလွယ်တကူလဲလှယ်အစားထိုးနိုင်ပါတယ်။ components တွေ အားလုံးဟာ solid state components တွေဖြစ်ပြီး၊ fault detection circuit နဲ့ diagnostic indicator တွေပါဝင်နေတဲ့အတွက်၊ ပုံမှန်အလုပ်လုပ်ဆောင်နေခြင်းရှိ မရှိကိုအလွယ်တကူ၊ သိနိုင်ပါတယ်။ PLC ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ control system တွေ malfunction အနေနဲ့ ပုံမှန်အလုပ်လုပ်ဆောင်နေခြင်း မရှိတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းဟာ field devices တွေပုံမှန်အလုပ်မလုပ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ field device တွေ ပုံမှန်အလုပ်မလုပ်သဖြင့် fault ဖြစ်ပေါါမှုဟာ (၈၅) % ခန့်ရှိပြီး၊ CPU ကြောင့် fault ဖြစ်ပေါါမှုဟာ (၅) ခန့်နဲ့ I/O interface တွေကြောင့် fault ဖြစ်ပေါါမှုကတော့ (၁၀) % ခန့်ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။
Posted by ဒူဒူကြီး at 16:41